Shiinaha Qaab fudud Reer Galbeedka Sariirta Sariirta Sariirta Sariirta Sariirta Alaabta Guryaha # 0109 Soo saar iyo Warshad | Yamazonhome
Qaab Fudud oo Reer Galbeed ah oo Siraaji ah oo Sariir Qolka Jiifka ah Sariirta Guryaha # 0109
Magaca: Sariirta adag ee qoryaha
Nambarka moodeelka: Amac-01 09
Cabir: 1850mm * 2055 * 865mm
Dhamaan sariirta qoryaha adag
Xulista geed tayo sare leh oo tayo sare leh ayaa leh culeys xambaarid culeys leh iyo awood haynta cidiyaha marka loo eego keymaha kale. Hal geed oo isku mid ah isla qeexitaanka ayaa taageeri kara laba qoryo caadi ah. Waxay ka samaysan tahay geedkii oo waxay qaadday rar culus. Waa wax adag oo qurux badan, caafimaad leh oo bey'adeed u fiican, iyada oo aan laga walwalin dhibaatooyinka urta, iyo culeyska xasiloon, Waxay qaadi kartaa miisaanka 8 nin oo qaangaar ah.
Naqshadaynta dib-u-habeynta bini-aadamka
Muraayadda madaxu waxay ka samaysan tahay qoryo adag, oo leh muuqaal hufan iyo xasilloonida sariirta. Xagasha naqshadeynta waxaa lagu hagaajiyay qaanso, naqshadeynta dhowna waxay ka dhigeysaa mid raaxo leh ku tiirsanaanta. Qaabka alaabtu waa inuu ka yimaadaa jidhka bini'aadamka, marka la barbardhigo walxaha toosan, Qalooca dabiiciga ah ee ku dhow jidhka bini'aadamka ayaa aad u dhaw. Naqshadeeyuhu wuxuu qaataa qaabka "qaabka-muuqaalka ah" ee naqshadeynta, xagasha foorarsiga, dhererka helitaanka fudud, dhererka sariirta 30cm, iwm, tijaabinta soo noqnoqota, iyo qeexitaanka raaxada dhabta ah.
Dalool caajis ah oo ku yaal qaybta dambe
Waxaa jira sariir kayd ah oo ka dambeysa madaxa sariirta shaqeysa, oo loo adeegsan karo in lagu dhigo buugaagta, koobabka biyaha, iwm. sariirta. Wareeg laba-hage wareeg ah oo lagu farsameeyo madaxa sariirta, oo ay weheliso qurux fudud, furan Dunida ayaa ku qarsoon gudaha.
Si adag loo diyaariyey sariirta qoryaha adag
Jirka sariirta adag wuxuu qaataa qalfoof adag oo qalfoof ah, kuwaas oo si cufan loogu abaabulay qaybinta cufnaanta sare, awood qaadid xoog leh iyo xoog isku mid ah, qaab dhismeedka xasiloon, ma fududa in la dumiyo. Waxa aan dhisnay waa sariir neefsasho, qalfoof ka kooban dhirta geedku ka baxo, iyo hawo qaadashada Neefsashada, yareynta isu ururinta qoyaanka, dib u qaboojiso oo si fiican u seexo habeenkii oo dhan.
Tareen dhar isku mid ah oo bilaash ah
Cagta sariirta waxaa si xor ah loogu qalabeyn karaa usha cagta, taas oo lagu dhejin karo dharka shaqsiyadeed, garbasaarrada, iwm., Fudud oo wax ku ool ah. Labada nooc ee iswaafajiya waxay kuu abuuri doonaan nolol guri oo ka duwan tii hore.
Lugaha sariirta adag ee alwaax adag oo wareegsan
Dhammaan sariirta qoryaha adag, majiro geedi socod maqaar saar ah, loox alwaaxyo kaladuwan leh, cagaha sariirta adag oo adag, xagal qalloocsan oo sax ah, xamuul xamuul xasiloon, oo ku siinaysa adiga dareen buuxa oo amaan ah. 17cm dhulka ka baxsan, salka hoose ma taabanayo nashqadda dhulka, ku habboon Nadiifi nadiifintaada oo daryeel booska hoose.
Sariir jiif ah oo alwaax adag oo casri ah
Xitaa haddii "aniga" aan adiga kula wadaagi karin dhibaatooyinka nolosha
"Aniga" kaligey ayaa ku geyn kara guriga
Deganaan iyo midab dhexdhexaad ah
Lakabyada ay soo saartay midabka alwaaxda asalka ah
103 darajo ergonomik ah madaxa sariirta
Yaree daalka maalin uun
Hore: Dharka Dharka Oak ee Oak Xajinta Silent Slide Rail Sliding Albaabka Dharka Qolalka jiifka # 0108
Xiga: Unitarp sabayn Yoga Mat Mat Dadka Waaweyn dabaasha barkadda Biyaha Yoga Mats Iyadoo Eva Non-Slip suuf 0389
Multi-Functional Single fadhiga Fadhiga Furnit ...
Fudud Fudud Fudud Guryaha Qolka Cunitaanka Sid ...
Guriga loo yaqaan 'Wooden Deluxe Villa Cat House' oo leh Barxad iyo Ba ...